Daariz - Apps on Google Play
Daariz waa barnaamij xiiso leh, bilaash ah oo si fudud kaaga caawinaya barashada akhriska iyo qoraalka Af-Soomaaliga goobkasta iyo goorkasta oo aad joogto.
Akhriska Af-Soomaaligu waxa uu lama-huraan u yahay waxbarashada, shaqada, xidhiidhka ehelka, adeegyada tignoolajiyadda cusub sida Zaad ama E-dahab iyo adeegsiga baraha bulshada oo ah waaga cusub ee wada-xidhiidhka iyo xog-helidda wakhtigan casriga ah.
Haddii aad tahay qof hadda bilaw ah iyo haddii aad aqoon kooban u leedahay afka Soomaaliga oo aad rabto in aad kordhisato, barnaamijka Daariz waa habka ugu habboon ee aad si dhakhso ah ugu baran karto Af-Soomaaliga.
Haddaba si aad u bilawdo geeddiga aad akhriska ku baranayso ama aad cid kale ku barayso, la soo deg barnaamijka Daariz. Waxa aad ka heli doontaa boqollaal cashar iyo laylisyo. Waxa intaa kuu dheer, sheekooyin kala geddisan oo aad dhammaantood heli karto adiga oo aan wax khad (Internet) ah u baahan. Taasi waxa ay kuu suuragelinaysaa in aad goob kasta iyo goorkasta wax ku baran karto.
Waxbarashadu waa in ay noqotaa mid uu ardaygu xiiseeyo. Sidaasi darteed, mar kasta oo aad cutub ama cashar dhammeyso, waxa aad ku guuleysan doontaa neefaf geel ah (oo daruuraha kuugu xareysan!). Waxa aad kula tartami kartaa saaxiibbadaa adiga oo tirsanaya inta halaad ee aad ku guuleystay muddadii aad Daariz wax ka baranaysay.
Waxa aannu Daariz kusoo kordhin doonnaa barnaamijyo qofka akhriska bartaa ka heli doono waxbarashada dugsiyada oo la soo koobay iyada oo loogu talogalay dadkii aan fursad u helin in ay dugsiyol galaan. Barnaamijyadan oo bilaash ahi waxa ay suuragelinayaan in qofkii dedaal la yimaaddaa uu imtixaan u fadhiisto oo qaato shahaadadaha waxbarashada.
Haddii aad ka heshay barnaamijkan, fadlan xiddigaha qiimaynta shan na sii!
Waxa aanu u turjunnay Af-Soomaali T&C iyo PP, sidoo kale waxa aanu hagaajinnay cillado farsamo oo mihim ahaa. Waa ku kaa! Si xiiso leh u baro Af-Soomaliga!
Eng Khalid Beekin
App kan waxad ka helaysa Gabayo iyo Maansooyin Qoral ah
Waa Qaamuus aad ka heli kartid eray bixin walba oo soomaali ah
Kororso Aqoontaada Su'aalo iyo Jawaabo.
*Hubaal 'Aqoon Guud' In aad Wax Badan Kafaa'idi Doontid*
Murtida Abwaanku waa qormo kooban oo dhaxal reebi doonta suugaanta soomaalida.